औषधीको भण्डार बदाम, दैनिक सेवन गर्दा यस्तो फाइदै फाइदा जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
भिजाएको बदामको तुलनामा अकुंरित बदाम धेरै स्वास्थ्यवद्र्वक हुने गर्दछ । बदामले स्तनमा दुध वृद्धि गर्दछ । कब्जियतको पीडाबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि बदाम खाने गरिन्छ ।
बदामले कफका साथमा रगत आउने समस्यालाई ठिक गर्दछ । बदामलाइ कुनै पनि व्यञ्जनमा राख्नाले त्यसको स्वादमा भरपूर वृद्धि हुन्छ ।
बदाममा चिल्लो, प्रोटिन र विभिन्न प्रकारका भिटामिन तथा खनिज पाइन्छ । जसले गर्दा बदाम चकलेट, केक र बिस्कुट जस्तै गरि खान योग्य छ ।
बदाम खानाले मुटुको रक्त केसिकाहरु स्वस्थ रहन्छन । बदामबाट भरिपूर्ण भोजनले स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । बोक्राका साथमा बदाम खानु अझ राम्रो मानिन्छ । तर, यसको मात्रा भने सन्तुलित हुनुपर्दछ ।
क्षमताभन्दा धेरै मात्रामा खानाले यसले प्रायजसो अपच हुन्छ र पेटलाई खराब गर्ने पनि गर्दछ । यति मात्र हैन, बदामको सेवन कोलेस्ट्रोललाई कम गर्नमा अझ प्रभावकारी हुन्छ ।
बदाममा हुने ‘मोनोस्याचुरेटेड फ्याट्स’ र ‘रिजर्भेट्रोल’ तत्वले छालालाई चम्किलो बनाउँछ । बदाममा पाइने पोषणयुक्त फाइबरले छालामा हुने अत्याधिक तेललाई निकालेर छालालाई नरम बनाउँछ ।
बदाममा छालालाई चाउरी पर्नबाट जोगाउने तत्व हुन्छ ।
बालबालिकालाई एलर्जीबाट जोगाउन तिनलाई बालककालमै बदाम खुवाउनुपर्ने केही शोधकर्ताहरूको दाबी छ । चार महिनाको उमेरदेखि नै बालबालिकाहरूलाई बदाम खुवाए तिनलाई एलर्जी नहुने बताइएको हो । यो कुरा अमेरिकामा भएको नयाँ शोधपछि खुलासा भएको हो ।
शोधले देखाएअनुसार शिशुवस्थामा नै बदाम खुवाइँदा ८० प्रतिशतले शिशुहरूमा हुने एलर्जीलाई घटाउन सहयोग हुने बताइएको छ । यो अध्ययन ‘द नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज’ले गराएको थियो । संस्थाले यो पत्ता लगाउनुलाई महत्वपूर्ण खोज भनेको छ ।
Topics #औषधीको भण्डार बदाम #बदाम #भिजाएको बदाम
Don't Miss it जन्डिस निको पार्न अपनाउनुपर्ने घरेलु उपायहरु
Up Next अदुवा खानाले स्वास्थ्यमा कस्तो फाइदा हुने गर्छ त !
यी खानेकुरादेखि साबधान हुनुहोस क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्छन
प्रशोधित चिनी क्यान्सरको सबैभन्दा ठूलो कारण हो प्रशोधित चिनी । यदि तपाईंलाई ब्राउन सुगर स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने लाग्छ…
शरीरका लागी अत्यावश्यक यी वस्तुहरूको आपूर्ति रोकिएमा सबैभन्दा पहिले दिमागमा असर पर्छ । ५ मिनेटसम्म दिमागमा अक्सिजन र ग्लुकोज आपूर्ति…
सधै स्वास्थ्य रहने टिप्स, यस्ता छन्
तल उल्लेख कुराहरुलाई ध्यान दिनाले सधै तन्दुरुस्त रहन मध्त पुग्छ । १. धेरै मान्छेले दाँत माझ्नलाई थोरै समय दिन्छन्, फ्लस…